ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ
အွန်လိုင်းမှာ စတော့တွေကို ဝယ်၊ ရောင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ ရှာနေလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ သင့်အား စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုတွင် လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် အွန်လိုင်းနေရာများတွင် လှုပ်ရှားနေသော ပွဲစားများ အစုအပုံရှိသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံး ပွဲစားတစ်ဦးကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပြီး၊ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် e-wallet ဖြင့် အပ်ငွေများကို သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
များသောအားဖြင့်စတော့အိတ်ချိန်းဆိုဒ်များသည်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ရာနှင့်ချီသောအစုရှယ်ယာများအား ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း (NYSE), NASDAQ နှင့် London Stock Exchange (LSE) ကဲ့သို့သောအဓိကစျေးကွက်များပါဝင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုဖြစ်စဉ်၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းကို ခြုံငုံမိပါသည်။ ၎င်းကို အပြည့်အစုံဖတ်ရှုပြီးပါက၊ သင်၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို မှန်ကန်သောခြေဖြင့်ရောက်ရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သောကိရိယာများအားလုံးကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်စု: အသစ်အသစ်သော စတော့ရှယ်ယာကုန်သည်အများစုသည် ပထမအကြိမ်ကြိုးစားရာတွင် ငွေဆုံးရှုံးသောကြောင့် အန္တရာယ်များကို သင်သေချာနားလည်မှုရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အပြည့်အစုံဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်၊ အွန်လိုင်းစတော့ခ်ရောင်းဝယ်ရေးနေရာ၌ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သောကိရိယာများ အားလုံးရှိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
'စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး' နှင့် ရိုးရိုးစတော့ရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအကြား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခြားနားချက်ရှိပါသည်။ နောက်ဆိုပါက၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို နှစ်အတော်ကြာ ကိုင်ထားလိုသည့် သဘောထားဖြင့် အစုရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူရန် ရှာဖွေနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သင်သည် သုံးလတစ်ကြိမ် အမြတ်ဝေစုများကို စုဆောင်းပြီး အမြတ်ငွေဖြင့် စတော့များကို ထုတ်ပစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည်ထိုအရာဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ရိုးရာအွန်လိုင်းစတော့ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာများ၏ဖြစ်ရပ်၌တည်၏ ကုန်သွယ်ဤသည်မှာ ရေတိုအခြေခံဖြင့် စတော့များကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Apple ကို တောင့်တနေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ £500 တန်တဲ့ စတော့ရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာ အမြတ် 2% နဲ့ ပြန်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင်သည် IBM တွင် ကျဆင်းနေသည်ဟု ခံစားရနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏စတော့များကို အတိုချုံးရောင်းချရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကျသွားပါက သင့်တွင်အမြတ်အစွန်းများရနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် စတော့ရောင်းဝယ်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်များသည် သင့်အား လွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချနိုင်စေပါသည်။ ဤနေရာတွင် သင့်တွင် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသည်ထက် ငွေပို၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် £100 တန်ဖိုးရှိ BT စတော့ရှယ်ယာများကို 5:1 ဖြင့်ဝယ်ယူပါက၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည် £500 ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ စတော့ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများသည် CFDs (စာချုပ်များအတွက်-ကွာခြားချက်များ) မှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အရင်းခံစတော့ကို မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သင်သည် ၎င်း၏အနာဂတ်တန်ဖိုးကို မှန်းဆနေခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးသည် ရေတိုအခြေခံဖြင့် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည် ရာထူးများကို နာရီအနည်းငယ်ထက်ပို၍ဖွင့်ထားခဲသော်လည်း အချို့သောသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရက်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကြီးမားသော အယူအဆမှာ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေသည်-
စတော့ရှယ်ယာများကိုသင်ပေးသည့်စျေးထက်နိမ့်သောဈေးဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
ဒါကြောင့် စတော့ရှယ်ယာ အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ ပထမဆုံး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကတော့ အရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတိုချုံးပြီး သွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်၊ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတွင် အကြာကြီးသွားနေခြင်းသည် စျေးနှုန်းတက်လာမည်ဟု သင်ထင်သောကြောင့် ရှယ်ယာများဝယ်ယူနေခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်တွင်၊ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ပွဲစားတစ်ဦးနှင့် စတော့များဝယ်ယူခြင်းနှင့် မတူပါ။
တနည်းပြောရရင်သင်ကသူတို့ကိုအရင်ပေးခဲ့တာထက်စျေးပိုကြီးဖို့ရောင်းဖို့သင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ရှည်စွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားတွင် `၀ ယ်ခြင်း order မိန့်ကိုထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ ရှည်လျားသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးသည် လက်တွေ့တွင် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျ Nike ကိုစတော့ရှယ်ယာအပေါ်အီရန်ခံစားနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး ဝယ်အမိန့်ထား
သင်၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်သည်
လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာ $ 85 ဖြစ်သည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Nike သည်ဒေါ်လာ ၉၅ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသည်
ဤသည် 11.7% ၏တိုးကိုယ်စားပြု
ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၏အစုရှယ်ယာတွင် ၁၁.၇% တိုးလာခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းကိုဒေါ်လာ ၁၁၇ နှင့်အမြတ်အစွန်းသို့လျော့နည်းစေသည်
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းသင်သည်သင်၏ Nike စတော့ရှယ်ယာများကိုမူလငွေပေးချေမှုထက် $ 10 ပိုမိုမြင့်မားစွာရောင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏တာရှည်အမှာစာသည်အောင်မြင်ခဲ့၏။ သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်သင်ရောင်းရန်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ထားခြင်းနှင့်ရရှိသောသင့်ရဲ့စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်အကောင့်လက်ကျန်ငွေထည့်သွင်းနေကြသည်။
သင်သည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဟုတ်ပါက၊ သမားရိုးကျ စတော့ပွဲစားများက သင့်အား စတော့ရှယ်ယာတွင် တိုတောင်းသွားစေရန် ခွင့်မပြုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ သင်သည်သာရှည်လျားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် CFD စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းကြောင့် အမြတ်ရနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့ယုံကြည်ထားသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အမြတ်အစွန်းရရန် လိုက်လျောညီထွေရှိသောကြောင့် နေ့စားကုန်သည်များကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားပါသည်။
တကယ်တော့၊ သင် CFD ပွဲစားနေရာကို တိုတိုတုတ်တုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေတင်မကပါဘူး - သင်စိတ်ကူးနိုင်သမျှသော ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားအားလုံးကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကတေကြ ဆီ, ဓါတျငှေ့, ညွှန်းကိန်း, ETFs, ရှေနှင့် cryptocurrencies ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုကို အတိုချုံ့ခြင်းသဘောတရားသည် အသစ်စက်စက်ကုန်သည်များအတွက် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးနေနိုင်သောကြောင့် အောက်တွင် ဥပမာတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါသည်။
လက်ရှိဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဒေါ်လာ ၁၃၀ ဖြစ်ပါတယ်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စတော့ရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၁၀၂ အထိကျဆင်းသွားသည်
၎င်းသည် ၂၁.၅% ကျဆင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
$1,000 ၏ရှယ်ယာတွင်၊ 21.5% ကျဆင်းခြင်းသည် အမြတ် $210.50 သို့ ဘာသာပြန်သည် - အခကြေးငွေနည်းသည်။
အထက်ပါအချက်များအရသင်အမြတ်အစွန်း ၂၁.၅% ရခဲ့ပြီး Facebook ၏စတော့အိတ်ချိန်းတန်ဖိုးသည်ဤပမာဏဖြင့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဥပမာနှစ်ခုစလုံးတွင်သင်၏အမြတ်ငွေသည်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်၏ Nike နှင့် Facebook ရာထူးများကိုရက်ပေါင်းများစွာခန့်ထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်နှင့်အမျှစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကသင်၏အနေအထားကိုဖွင့်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာရှိအကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များကသင့်အားရာနှင့်ချီ။ ခွင့်ပြုသည်၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော equity ၏။ ဤအရာသည်သင့်အားခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အလွန်များပြားသောအစုရှယ်ယာအစုစုကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
NYSE သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်အများဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်သောကြောင့် အွန်လိုင်းပွဲစားများက သင့်အား အတားအဆီးမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အကြိုက်များအပါအဝင် အကြီးဆုံး blue-chip ကုမ္ပဏီအချို့ကို NYSE တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။ ဒစ္စနေး၊ Berkshire Hathaway၊ Ford Motors၊ JP Morgan၊ Visa နှင့် Nike က.
NYSE ၏နောက်မဝေးသည်မှာ NASDAQ ဖြစ်သည်။ လဲလှယ်ရေးတွင် စာရင်းသွင်းထားသော ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် နည်းပညာလောကမှ လာပါသည်။ Facebook၊ Apple၊ Twitter၊ Netflix နှင့် Microsoft တို့၏ လိုင်းများကို တွေးကြည့်ပါ။
LSE သည် BP၊ British American Tobacco၊ Barclays၊ HSBC နှင့် Tesco တို့အပါအဝင် ကြီးမားသောအရွယ်အစားကုမ္ပဏီများ၏အိမ်လည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ယူကေစီးပွားရေးကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ရှာဖွေနေပါက၊ ၎င်းသည် FTSE 100 အညွှန်းကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တန်ဖိုးရှိပေမည်။
အာရှစီးပွားရေးနှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်ကြိုးစားနေသူများအတွက် TSE သည်ကြီးမားသောသိုလှောင်ရုံအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတွင် Soft Bank၊ Mitsubishi နှင့် Toyota တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းဆိုဒ်များသည် CFDs မှတစ်ဆင့်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်ရောင်းဝယ်နေသောစတော့ရှယ်ယာကိုသင်မပိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ CFDs တွေကအနာဂတ်မှာမင်းရဲ့စတော့ရှယ်ယာရဲ့ ဦး တည်ချက်ကိုခန့်မှန်းဖို့သင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင်၊ CFDs များကို အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါတွင် သင်သည် မည်သည့်စတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုမှ ခံစားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အမြတ်ဝေစုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ သင်ပေးချေသည်ထက် မြင့်မားသော/နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် စတော့ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူ/ရောင်းချခြင်းဖြင့် အရင်းအနှီးအမြတ်များမှတစ်ဆင့် ငွေရှာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Leverage နှင့် Margin နှင့်အတူစတော့အိတ်ကုန်သွယ်
အကယ်၍ သင်သည် အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးလောကတွင် စတင်လုပ်ကိုင်နေပါက၊ leverage နှင့် margin မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ခိုင်မာစွာနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အသစ်စက်စက် ကုန်သည်အများစုသည် ငွေဆုံးရှုံးသည် - ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤဆုံးရှုံးမှုများကို ချဲ့ထွင်၍ မချဲ့ထွင်ချင်ပါ။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်သင်၏ငွေစာရင်းသည်သင့်အကောင့်ရှိငွေထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကို 5: 1 ကဲ့သို့အချိုးအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ Layman ၏စည်းမျဉ်းအရဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ 'margin' ၏တန်ဖိုးထက် ၅ ဆပိုသောရောင်း ၀ ယ်မှုအမိန့်ကိုပေးနိုင်သည်။
အနားသတ်သည် အပ်ငွေတစ်ခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းသည် သင့်အား လွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုတောင်းသောအသေးစိတ်အချက်ကို ခြုံငုံမိသည်နှင့်အမျှ၊ သင်၏စတော့ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်သည် သင့်အား အချို့သောရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဆန့်ကျင်ပါက၊ သင်သည် သင်၏အနားသတ်ကို ပွဲစားထံဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို ရပ်တည်နေပါသည်။
သင်ဟာ British American Tobacco (BAT) စတော့ရှယ်ယာတွေကိုစိတ်စွဲလမ်းနေတဲ့အတွက်ရှည်လျားလွန်းတယ်
လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာပေါင် ၂၉.၅၀ ဖြစ်သည်
သင့်အကောင့်တွင်£ 200 သာရှိသော်လည်းသင်ပိုမိုရောင်းလိုသည်
UK ကန့်သတ်ချက်များအရ သင်သည် သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင် 5:1 ၏ leverage ကိုအသုံးပြုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပေါင် ၁၀၀၀ တန်သော BAT စတော့ရှယ်ယာများပေါ်တွင်သင်အမှာစာဝယ်ယူလိုက်သည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် BAT ၏စတော့သည်ပေါင် ၃၃.၅၀ (၁၃.၅%) အထိတိုးလာသဖြင့်သင်ရောင်းရန်မှာထားခြင်းဖြင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုရရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာအရသင်သည်ပေါင် ၂၀၀ ကိုအစုရှယ်ယာ ၁၃.၅% အမြတ်အစွန်းရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပေါင် ၂၇ ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ကသြဇာသက်ရောက်မှု ၅: ၁ ကိုလျှောက်ထားသည်နှင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းမှာပေါင် ၁၃၅ ဖြစ်သည် (ပေါင် ၂၇ x ၅း၁)
အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း စတော့ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်များတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချခြင်းသည် သင့်အတွက် အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် - သင်သည် £200 ဖြင့် British American Tobacco (BAT) တွင် အတိုးအကျယ် 5:1 ဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်ပေါင် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပြီးသင်၏အနားသတ်သည်£ 1,000 ဖြစ်သည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် BAT စတော့သည်ပေါင် ၂၃.၆၀ သို့ကျသွားသည်
၎င်းသည် ၂၀% ကျဆင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်သင်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်တင်သွင်းသောအမြင့်ဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသည် (ပေါင် ၂၀၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပေါင် ၁၀၀၀ မှ) တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်“ ဖျက်သိမ်း” ခံရသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏£ 200 margin ကိုဆုံးရှုံးသည်ဟုဆိုလိုသည်
အထက်ဖော်ပြပါမှ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခု ကျဆင်းသွားပါက သင့်အနားသတ်တစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ငွေစာရင်းရှင်းထုတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သင်၏ margin အကောင့်သို့ ရန်ပုံငွေများ ပိုမိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
5:1 တွင် ကြီးမြင့်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်၊ margin သည် 20% (1/5 = 0.2) ဖြစ်သည်။ သို့သော် လွှမ်းမိုးမှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အနားသတ်သည် လျော့နည်းသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ leverage ၏ 20:1 သည် margin 5% (1/20 = 0.05) သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ စတော့အရောင်းအ၀ယ်သည် သင့်အား 5% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါက၊ သင်သည် သင်၏အနားသတ်ကို ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ်ထားခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်တစ် ဦး ချင်းအမှာစာ ၂ ခုအမြဲလိုအပ်သည်။ တစ်ခုကကုန်သွယ်ရေးကိုဖွင့်ဖို့၊
အကယ်၍ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုကိုကြာမြင့်စွာသွားနေလျှင်၊ သင်သည် '၀ ယ်ယူ' အမိန့်ကိုဖွင့်ပြီး 'ရောင်း' မှုအမိန့်ကိုပိတ်လိုက်သည်
အကယ်၍ သင်ဟာစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သင်ဟာ 'sell' order ကိုဖွင့်ပြီး 'buy' order နဲ့ပိတ်ပါ
သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါစေ၊ သင်အမြဲတမ်း 'market' order သို့မဟုတ် 'limit' order ကိုအမြဲရွေးချယ်ဖို့လိုလိမ့်မည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းသည်နောက်လာမည့်စျေးနှုန်းကိုသင် ၀ ယ်ယူလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၀ င်ငွေစျေးနှုန်းအပေါ်သင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကထိုသို့ပြုလုပ်ခဲသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အမှာစာကိုဖြည့်သည့်အခါ Nike မှဒေါ်လာ ၈၅ တန်လျှင်ကုန်သွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၈၅.၅၀ ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းဟာလာမယ့်ရရှိနိုင်မယ့်စျေးနှုန်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ပဲ။
တနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏စတော့ရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ကန့်သတ်ချက်ရှိသောအမိန့်များနှင့်ကပ်လိုပေမည်။ ဤသည်ကသင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်မည်သည့်စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်သင့်သည်ကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုမည်သည့်အာမခံချက်ဘယ်တော့မှပေမယ့်အနည်းဆုံးသင့်အားသင့်အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်စျေးနှုန်းမှာစျေးကွက်ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Nike ၏စတော့ရှယ်ယာများကိုလက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၈၅ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသောဥပမာတူညီသည်။ သင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသော်လည်းစျေးနှုန်း $ 85 သို့ရောက်သောအခါသင်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်လိုပေမည်။ ဤသည်ကသင့်အားစတော့ရှယ်ယာများကိုလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ပျံ့နှံ့.
အွန်လိုင်းစတော့အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်သိမ်းလိုသည့်အတိအကျစျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်စတော့ကုန်သွယ်ရေးသည်သင့်အားဆန့်ကျင်သောအဖြစ်အပျက်တွင်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
သင်က IBM စတော့ဈေးကွက်ကိုရောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါစို့၊ သင်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ ၁၁၂ ဖြင့်စျေးသို့ဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်
သင့်ရှယ်ယာ၏ 5% ထက်ပို၍ မဆုံးရှုံးချင်ကြောင်း သင်ဆုံးဖြတ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် stop-loss order ကို သတ်မှတ်ပါ
သင်၏ Stop-loss order order တန်ဖိုးကို ၁၀၆.၄၀ ဒေါ်လာဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်သင်၏ ၁၁၂ ဒေါ်လာဝင်ငွေ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်လျော့နည်းသည်
တစ်ပတ်အတွင်း IBM ၏စတော့ရှယ်ယာများသည် ၂၀% လျော့နည်းပြီး ၈၉.၆၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
သို့သော် stop-loss ကိုဒေါ်လာ ၁၀၆.၄၀ ဖြင့်သင် install လုပ်သည်နှင့်အမျှသင်၏ရှယ်ယာ ၅% သာဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အထက်တွင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၏ ၅%) သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ (ဒေါ်လာရှယ်ယာ ၂၀% ၏ ၂၀%) နှင့် $ 50 သို့လျှော့ချခဲ့သည်။
ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့် stop-loss အမိန့်များသည် ၁၀၀% ဘယ်သောအခါမျှအာမခံချက်မရှိကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်အခြေအနေတွင်သင်၏ရပ်တန့်မှုအမိန့်နှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ မကြာခဏဆိုသလို 'အာမခံ' ရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကိုပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ပွဲစားသည် ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ မလိုက်ဖက်သည်ဖြစ်စေ သင်၏ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုစျေးနှုန်းကို အစပျိုးကြောင်း အာမခံပါမည်။
အညီအမျှအရေးကြီးသည့်အနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းယူမှုသည် Stop-loss order ရှိသော်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းတစ်ခုကိုပြည့်မီသည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏အမြတ်ကို ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Coca Cola စတော့ရှယ်ယာများကို $47 ဖြင့်ဝယ်သည်ဆိုကြပါစို့။ သင့်ကိုယ်သင် အမြတ်အစွန်း 10% သတ်မှတ်ထားပြီး အမြတ်အစွန်းယူမှုကို $51.70 ဖြင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
Coca-Cola ၏စျေးနှုန်းသည် ဤစျေးနှုန်းကိုထိသွားပါက၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ထဲသို့ ထည့်ထားသောငွေများကို အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စတော့ခ်အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါ သတိထားရမည့်အရေးကြီးဆုံးသော မက်ထရစ်များထဲမှတစ်ခုမှာ အရင်းခံအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစား အကွာအဝေးတွင်ပါရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အဓိကကျသင့်ငွေများကို ခိုင်မာစွာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်မဟုတ်သောအခကြေးငွေများသည် သင်၏စတော့ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော အခကြေးငွေများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အချို့သောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများက အပ်ငွေအခကြေးငွေကို ကောက်ခံသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်နှိမ်သည့်အချိန်မှစတင်သည် - အများအားဖြင့် သင်အပ်ငွေပမာဏ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားသည် Visa အပ်ငွေများတွင် 1.5% ကောက်ခံပြီး သင့်အကောင့်ထဲသို့ £1,000 ထည့်လိုပါက ဝန်ဆောင်ခ £15 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏဆိုသလို ငွေထုတ်ခြင်းမှာလည်း ဖြစ်တတ်သည် - ထို့ကြောင့် အကောင့်မဖွင့်မီ သေချာစစ်ဆေးပါ။
ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော အခကြေးငွေသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသောအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ သင့်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးအကောင့်သည် လပေါင်းများစွာကြာအောင် တံခါးချပ်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်တွင် ၎င်းကို ပွဲစားမှ ကောက်ခံပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ပွဲစားသည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုကြေးကို သင့်အကောင့်လက်ကျန်မှ ဘာမှမကျန်မချင်း လစဉ်နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းအများစုသည် ကော်မရှင်ခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ၎င်းသည် သင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားသည် ကော်မရှင်ခ 0.5% ကို သင် £1,000 တန်ဖိုးရှိ BT စတော့များကို ဝယ်ယူပါက အခကြေးငွေ £5 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သတိပြုပါ၊ သင်ကုန်သွယ်မှု၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကော်မရှင်တစ်ခုပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ BT စတော့ရှယ်ယာများကိုစုစုပေါင်းပေါင် ၁၂၀၀ ဖြင့်ရောင်းပါကသင်၏ ၀.၅% ကော်မရှင်သည်£ 1,200 ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်ခပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ CFD ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းနိုင်ခွင့်ပြုသည်။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်မည့် ပျံ့နှံ့မှုသာဖြစ်သည်။
Newbie စတော့ကုန်သည်များသည် အခကြေးငွေ 'နည်းပညာ' မဟုတ်သောကြောင့် ပျံ့နှံ့မှုကို မေ့သွားတတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖြန့်ကြက်မှုသည် သင့်အကောင့်လက်ကျန်မှ မည်သည့်ငွေကိုမျှ နုတ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းအစား၊ ပျံ့နှံ့မှုသည် စတော့၏ 'ဝယ်' နှင့် 'ရောင်း' စျေးနှုန်းကြား ကွာခြားချက်မျှသာဖြစ်သည်။
Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏ ၀ ယ်ယူစျေးနှုန်းမှာ ၈၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏ရောင်းဈေးမှာ ၈၃.၃၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်မှာ ၂% ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနည်းဆုံး ၂% အမြတ်ရရှိရန်ပင်ချိုးဖောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ သင်က ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၈၅.၀၀ ဖြင့် ၀ ယ်သည်ဆိုပါစို့။ သင်အမှားတစ်ခုကျူးလွန်မိပြီဆိုတာသိမှပဲ။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ချက်ချင်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်။ သို့သော်၊ သင်ဝယ်သောဈေးနှုန်းအတိုင်း (ဒေါ်လာ ၈၅) နှင့်အစုရှယ်ယာများကိုရောင်းနိုင်မည့်အစားသင်ရောင်းသည့်စျေးနှုန်းအတိုင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဤသည်က $ 83.30 ၏နိမ့်သောစျေးနှုန်းပမာဏဖြစ်သောကြောင့်သင်အမှန်တကယ် 2% အရှုံးလုပ်လိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်ရောင်းဈေးသည် ၈၅ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာလျှင်တောင်မှသင်ချိုးဖျက်လိမ့်မည်။
သင့်ဘ၀တွင် စတော့တစ်ခုတည်းကို ဘယ်တော့မှ အရောင်းအဝယ်မလုပ်ဘဲ ဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်လိုတွေးမိလဲ။ တကယ်တော့ အလုပ်များ? သို့ဆိုလျှင် အောက်တွင် အဆင်ပြေသော အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ကို တွေ့ရပါမည်။ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင်သည် 10 မိနစ်ထက်နည်းသော သင်၏ပထမဆုံးစတော့ကို အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၁: စတော့အိတ်ချိန်းဆိုဒ်ကိုရှာပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်နိုင်ငံတကာစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကမ်းလှမ်းသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေပါသလားသို့မဟုတ်သင်၏အဓိက ဦး စားပေးအခကြေးငွေလား။
သင့်အား လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကူညီပေးရန်အတွက်၊ ဤစာမျက်နှာတွင် စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို အကြံပြုချက်များစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင့်တွင် ပွဲစားတစ်ဦးကို သင်ကိုယ်တိုင် စူးစမ်းရန် အချိန်မရှိပါက၊ အောက်ဖော်ပြပါ ပလပ်ဖောင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါမည်။ ၎င်းသည် အဆင့်တစ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုင်စင်နှင့် ရာနှင့်ချီသော ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်ဆောင်ထားရုံသာမကဘဲ ငွေများကို ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြင့် အလွယ်တကူ ငွေသွင်းနိုင်ပါသည်။
သင့်လျော်သော စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက ပွဲစားက မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာ သိတယ်။
သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုနယ်ပယ်တွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းများသည်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သေချာစေသည်။ သင်ပြုလုပ်ရန်မှာသင်၏အစိုးရထုတ်ပြန်ထားသော ID မိတ္တူတစ်ပုဒ်ကို upload လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီးပွဲစားသည်ချက်ချင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၄ - ကုန်သွယ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာပါ
ယခု သင်သည် သင်၏ ပွဲစားအကောင့်ကို ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ထားပြီး၊ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာများကို အရောင်းအဝယ်စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘောလုံးလှိမ့်ရန်၊ သင်ရောင်းဝယ်လိုသော စတော့ကိုရှာဖွေပါ။ သင့်တွင် သီးသန့်ရှယ်ယာတစ်ခုမရှိပါက ပွဲစား၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအပိုင်းကိုရှာဖွေပါ။
လှမ်း 5: စတော့အိတ်ရောင်းဝယ်ရေးအမိန့်ထားပါ
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်အတွက်သင်မှာယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါတို့လမ်းညွှန်တွင်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်ကိုမည်သို့မည်ပုံထည့်သွင်းထားကြောင်းနှင့်ဆွေးနွေးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းစေလိုလျှင်အပိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
၀ ယ်ခြင်း (ကြာရှည်) မှရောင်းခြင်း (အတို) အမိန့်မှရွေးချယ်ပါ
သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ရန်ယူ - အမြတ်အမိန့်ကို set up
မှာယူမှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် သင့်ဝယ်ယူမှုကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အဆင့် 6: သင်၏စတော့အိတ်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်
အကယ်၍ သင်သည် stop-loss နှင့် အမြတ်အစွန်းယူရန် အမိန့်တစ်ခုကို ချထားပါက၊ သင်သည် နောက်ထပ်ဘာမှလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရာနှစ်ခုတွင် တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်ပွားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်၏ အမြတ်အစွန်းယူမှု စတင်သောအခါတွင် သင်သည် ငွေရှာနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်၏ stop-loss Order စတင်သောအခါတွင် သင်သည် ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုတွင် ထွက်ပေါက်အမှာစာများကို ထည့်သွင်းမထားပါက၊ ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ပိတ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး ဝယ်အမိန့်ထားလျှင်, သင်၏ကုန်သွယ်ရေးမှထွက်ရန်ရောင်းအမိန့်ထားပါ
ဒါကြောင့်ယခုငါတို့စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြင်နှင့်အပြင်ကိုရှင်းပြပြီးပြီ ဖြစ်၍ သင်အသုံးပြုလိုသောပလက်ဖောင်းကိုစတင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ရာနှင့်ချီသောပံ့ပိုးပေးသူများရှိသဖြင့်မည်သည့်ပွဲစားသည်စာရင်းသွင်းမည်ကိုသိခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးနေရာအသစ်သို့မ ၀ င်မီအောက်ပါအချက်များကိုစဉ်းစားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
အခကြေးငွေများ၊ ပြန့်ပွားမှုများနှင့်ငွေပေးချေမှုများကဲ့သို့သောမက်ထရစ်ကိုတောင်မရောက်မီ - သင်ရွေးချယ်ထားသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားထိန်းညှိထားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပွဲစားများအားလုံးသည်အလွှာ ၁ လိုင်စင်ကိုထိုကဲ့သို့သောအလောင်းများနှင့်အတူကိုင်ထားရန်လိုအပ်သည် FCA (ယူကေ)၊ ASIC (သြစတေးလျ) သို့မဟုတ် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်)။ ပွဲစားနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အဲဒါပါပဲ။ မဖြစ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေများအန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူအများစုသည်ငွေကြိုတင်သို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ သငျသညျလက်ငင်းသိုက်မှအကျိုးချင်လျှင် E-ပိုက်ဆံအိတ်လည်းကောင်းတစ် ဦး option ကိုဖြစ်ကြသည်။
တင်းကျပ်သော ပျံ့နှံ့မှုများနှင့် ကော်မရှင်နိမ့်ကျမှုများကြား ပြီးပြည့်စုံသော ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးဆောင်သည့် စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်သက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ပွဲစားအချို့သည် ကော်မရှင်ခမပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုများကို ပေးဆောင်သည်၊ သို့သော် ပျံ့နှံ့မှုများသည် ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ် အခြား platform များထက် မြင့်မားသည်။ အလားတူ၊ ပွဲစားအနည်းစုသည် အဓိကစတော့ရှယ်ယာများတွင် သုညပျံ့နှံ့မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ကော်မရှင်များသည် မကြာခဏဆိုသလို မြင့်မားသောဘက်တွင် ရှိနေသည်။
သင်သည် စတော့ရှယ်ယာများကို အမြတ်အစွန်းဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ရှာဖွေနေပါက၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားက ၎င်းကို ပံ့ပိုးပေးကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်တည်နေရာပေါ်မူတည်၍ ပွဲစားက သင့်အား ပေးဆောင်နိုင်သည့် သြဇာပမာဏကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတွင် အခြေစိုက်သောသူများကို စတော့ရှယ်ယာများတွင် 5:1 ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် ကန့်သတ်ချက်များ လုံးဝမရှိသောကြောင့် 500:1 အထိ ကြီးမားသော ပမာဏကို ပေးဆောင်သည့် ပွဲစားများကို မကြာခဏ တွေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာများကို ရေတိုအခြေခံဖြင့် ဝယ်ရောင်းရန်ရှာဖွေနေပါက၊ သင်သည် သုတေသနကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် လုံးဝအရေးကြီးပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိစ္စတွင်၊ သင်သည် အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများကို စုစည်းပေးသည့် စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်ကို အသုံးပြုလိုမည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအချက်များသည် စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ရှယ်ယာလောကတွင် တန်းတူရည်တူအရေးကြီးပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းများကို ပေးဆောင်သည့် ပွဲစားတစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပါ။ ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ.
သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုသောစတော့ရှယ်ယာအမျိုးအစားများကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်သင်တို့အချို့သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းမှတစ်ဆင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အစုရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ခြင်းကိုပျော်ရွှင်ရဖွယ်ရှိသော်လည်းအချို့သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားများကလက်ခံထားသောစတော့ရှယ်ယာအရေအတွက်နှင့်အထူးသဖြင့်မည်သည့်ဖလှယ်မှုကသင့်အားဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
မျက်နှာသစ်စတော့ရှယ်ယာကုန်သည်များလည်းသတိမမူဘဲ, သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစား၏ထုတ်ယူခြင်းမူဝါဒကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာပွဲစားသည်ငွေထုတ်ယူခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အချိန်ယူသည့်အချိန်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အထိနိမ့်သည်။ ငွေပေးချေမှုကိုတောင်းခံပြီးသည့်နောက် ၄၈ နာရီထက်နောက်မကျစေဘဲစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များနှင့်ကပ်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ဌာနကိုလည်းသင်လေ့လာသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး ၂၄/၅ တွင်ထောက်ခံမှုပေးသောစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုနှစ်သက်သည် - နောက်ပိုင်းတွင်ဘဏ္financialာရေးစျေးကွက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပွဲစားများကတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည့်အခါ၎င်းသည်ခွန်အားမပေးသောဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်။
5 ၏အကောင်းဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းပွဲစားများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း Picks
သင့်တွင် ပွဲစားတစ်ဦးကို သင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရန် အချိန်မရှိပါက၊ အောက်တွင် 2022 ၏ ထိပ်တန်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက် အကြံပြုချက်ငါးခုကို တွေ့ရပါမည်။
AVATrade ရှိအဖွဲ့သည် ယခု $20 အထိ ကြီးမားသော 10,000% forex ဘောနပ်စ်ကို ပေးဆောင်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အမြင့်ဆုံးဆုကြေးခွဲဝေမှုကို ရယူရန် $50,000 ပေးသွင်းရပါမည်။ မှတ်သားထားပါ၊ ဘောနပ်စ်များရရှိရန် အနည်းဆုံး $1,000 ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပြီး ငွေစာရင်းမသွင်းမီ သင့်အကောင့်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ၊ သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့် 1 အကြိမ်တိုင်းအတွက် $0.1 ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကို နောက်တစ်ဆင့်သို့တက်လှမ်းရန် ကြိုးပမ်းနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စူပါအတွင်းကျကျလမ်းညွှန်ချက်သည် အမှုန်အမွှားကင်းစင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမစတင်မီ သင်သတိထားရန်လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည့် လိုအပ်ချက်အားလုံးကို အကျုံးဝင်ပါသည်။
၎င်းတွင် ပျံ့နှံ့မှု၊ စည်းမျဉ်း၊ ကော်မရှင်များ၊ လွှမ်းမိုးမှု၊ နှင့် အမိန့်များမှ အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်ငါးခုကိုလည်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။
သင်သည် မည်သည့်ပလက်ဖောင်းဖြင့် အကောင့်ဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ စတော့ရှယ်ယာ CFDs များကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၏ အန္တရာယ်များကို နားလည်ကြောင်း သေချာစေပါ - အထူးသဖြင့် လီဗာကို အသုံးပြုရန် စီစဉ်နေပါက။
စတော့ရှယ်ယာများကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ရေတိုအခြေခံဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို မှန်းဆနေပါသည်။ ၎င်းကို CFD များမှ ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၊ အမြတ်ဝေစု ခံစားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင် ၅၀ ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။ အချို့ပွဲစားများကထပ်မံတောင်းသည်
အွန်လိုင်းမှအစုရှယ်ယာများရောင်း ၀ ယ်သောအခါ ID ကိုဘာကြောင့် upload လုပ်ရမည်နည်း။
တရား ၀ င်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များသည်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကိုလိုက်နာရန် ID ကိုတင်ရန်တောင်းဆိုသည်။
အခကြေးငွေပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်လာ။ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ၊ ပြန့်ပွားမှုများ၊ နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများနှင့်ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သောအခကြေးငွေများပါ ၀ င်သည်။
သင်ကျဆင်းနေသောစတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းလိုပါကသင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ထားပါ။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်ပစ္စည်းဝယ်ရန်မှာထားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, CFD စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များအားလုံးသည်သင့်အားသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ကန့်သတ်ချက်များသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ (လက်လီ (သို့) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) နှင့်သင်၏တည်နေရာပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယူကေနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့တွင်လက်လီကုန်သည်များအတွက်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကို 5: 1 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
သင်သည်ငွေကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းကိုအကြွေး / အကြွေးကဒ်၊ e-wallet သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်များမှတစ်ဆင့်ရွေးချယ်သည်။